तपाईसँग यस्तो बानी छ ? ग्यारेण्टीका साथ भन्न सकिन्छ अब कलेजो बिग्रियो – Online BBC
तपाईसँग यस्तो बानी छ ? ग्यारेण्टीका साथ भन्न सकिन्छ अब कलेजो बिग्रियो
नयाँ पत्रिकाबाटकेही दिनअघि एउटा च्यारिटी सोमा बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले आफू केवल २५ प्रतिशत कलेजोले बाँचिरहेको सार्वजनिक गरे । थाहा पाउँदा ७५ प्रतिशत कलेजो बिग्रिसकेको अवस्था रहेको र बाँकी २५ प्रतिशत जोगाएर आफू बाँचिरहेको उनले बताएका थिए । तर, के बिग्रिएको कलेजो जोगाउन सकिन्छ ? कलेजोबारे जान्नैपर्ने तथ्य :
Prevतपाईसँग यस्तो बानी छ ? ग्यारेण्टीका साथ भन्न सकिन्छ मुटुरोगको बिरामी हुनु भयो
Nextमलेसियामा ५४ जना नेपाली कामदारको मृत्यु ! RIP